Dungarees, तपाईं या त तिनीहरूलाई मन पराउनुहोस् वा तपाईं तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ बेजिया
Dungarees, तपाईं या त तिनीहरूलाई मन पराउनुहोस् वा तपाईं तिनीहरूलाई घृणा
मारिया vazquez | 31/05/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
बिब एउटा लुगा हो कसैलाई उदासीन छोड्दैन। कुनै मध्य मैदान छैन, तपाइँ कि त यो मनपर्दछ वा तपाइँ यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यो वसन्त summerतु ग्रीष्म 2021तु २११, जो पहिलो समूहमा छन् भाग्यमा छन्! हामी यो भन्न सक्दैनौं कि बिब्स एक प्रवृत्ति हो, तर हामी तिनीहरूबाट सिर्जना गर्न सक्ने स्टाइलिंगको प्रकार हो।
जैसा कि तपाईंले अवलोकन गर्नुहोला, धेरै जुनसुकै फैशन क्याटलगहरूमा हामीले पत्ता लगाएका छौं, देश शैली एक महान भूमिका प्राप्त। यद्यपि यस शैली बिबको फाइदा लिनका लागि एक मात्र तरीका छैन जुन हामी तपाईंलाई तल भन्छौं।
2 न्यूनतम लिनेन
जिingगमले पोशाकको साथ महकोम्ब चोली र ठूलो कलरहरूको साथ प्याटर्न गरिएको शर्ट वा फुकाएको बाहुलाहरू, यस शैलीका केही प्रमुख पोशाकहरू हुन् जुन यस मौसममा धेरै कुराको कारण दिन्छन् यदि हामी फेसन फर्महरूमा ध्यान दियौं भने। र bibs पछिल्लो सँगै मिलेर आउटफिटहरू सिर्जना गर्न एक शानदार विकल्प बन्नुहुन्छ।
को सेतो डेनिम समग्र यस प्रकारको स्टाइललाई आकार दिन तिनीहरू मनपर्नेहरू हुन्। साथै सबैभन्दा बहुमुखी तपाईले तिनीहरूलाई कुनै ब्लाउज वा शर्टसँग मिलाउन सक्नुहुनेछ जुनसँग प्याटर्न वा रंग छ। आफ्नो हेराई पूरा गर्न तपाईलाई केहि समुद्री तटको जुत्ता वा एस्पाड्रिल्स र रफिया ब्याग चाहिन्छ।
गर्मीमा यस लुगा लगाउने अर्को तरिकाaमा शर्त लगाउनु हो लिनेन संस्करण उही। लिनन बिब्स गर्मीको आनन्द लिनको लागि धेरै ताजा र हल्का विकल्पहरू हुन्। प्राकृतिक वा न्यानो रंगहरूमा, तपाईं फेसन फर्महरूको क्याटलगमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन सामान्य रूपमा यस सामग्रीको लागि अप्ट हुन्छन्।
यी लिनेन बिबहरू, हामीले पहिले हामीले कुरा गरेका कटन बिबहरूसँग मिल्दैन धेरै साधारण माथि: क्रप टप्स वा सेतोमा आधारभूत टी-शर्टहरू। सामान्यतया, यी न्यूनतम शैलीहरू सपाट फावो-प्रकारको सैंडलहरूले पूर्ण गर्दछन्।
के तपाईंलाई चौंडा मन पर्छ? तिमी सँग केहि छ?
छविहरू - @mariagarridoest, @ mirenalos, @ jessiekass, @autroraartacho, @carlotaweberm, @itziaraguilera, @indie_home, @nereaalos, @candicemtay
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » Dungarees, तपाईं या त तिनीहरूलाई मन पराउनुहोस् वा तपाईं तिनीहरूलाई घृणा
पेट डायस्टेसिस भनेको के हो?